भयावह बन्दै गएको बैंकिङ कसुर : चेक बाउन्सका कारण जेलभित्र जिन्दगी ! ~ Banking Khabar
भयावह बन्दै गएको बैंकिङ कसुर : चेक बाउन्सका कारण जेलभित्र जिन्दगी !
बैंकिङ खबर/ वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तारसँगै बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । प्रायः जानी जानी र कतिपय अवस्थामा कसुरबारे अनभिज्ञ भएर पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्, यद्यपि कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा नपाएर कसुर गरेँ भन्ने छुट कानुनले दिँदैन । एकातिर बैंकिङ कसुरका प्रावधानबारे चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ कसुरबारे सामान्य वा पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि कसुर गर्नेहरूलाई सचेत गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । तसर्थ, यहाँ बैंकिङ कसुरमा सजाय भएका प्रतिनिधि घटनाहरूसँगै बैंकिङ कसुर मानिने कामहरू, कानुनी व्यवस्था, कसुरबमोजिम हुने सजायलगायत विषयमा जानकारी दिइन्छ ।